enempilo futhi sibalo amahle - leli iphupho zonke wesifazane. isisindo Extra ngokuyinhloko imali kwi esiswini, futhi singathanda ube mncane umuvi okhalweni. Ukuze wenze lokhu, yenza iqoqo umzimba nsuku zonke, phakathi kwabo "Mill". Ukuzivocavoca nge deflections, zisonta, ethile ups izinyawo ukwenza obliques kanye izinhlangothi nokunwebeka kanye amahle, ngenxa okuyinto okhalweni ngeke likhanga kakhulu.
"The Mill" - uzivivinye Yiqiniso, ijwayelekile sonke kusukela esikoleni esiphakeme, ngenkathi ngokomzimba Ezifundweni sakwenza ukuzivoxavoxa noma ukwenza aerobics. Lokhu has embodiments eziningana, ngayinye esiqeqesha iqembu elithile kwemisipha. isakhiwo okunjalo ngeke kugcine usizo ukuqeda amakhilogremu ambalwa okuyizinto engadingekile, kodwa futhi yokwelula futhi kuqiniswe isimiso kwemisipha.
Ukuzivocavoca, "Mill" okhalweni kumane Irreplaceable. Into esemqoka - ngemizamo kancane nesineke, futhi ngemva kwesikhashana uzokubona yi enhle. Ezemidlalo Yiqiniso, kumele sihambisane ukudla okusesilinganisweni nangokulinganisela, ukuze umphumela kwaphawuleka ngempela.
Classical "Mill" - uzivivinye. Kanjani ukuyenza?
Isinyathelo sokuqala siwukuba ukwenza Amazing omuhle: egijima endaweni, jumping on ukweqa intambo,-sit-ups. Ngemva umzimba sekuqala ukufudumala kancane bese imisipha ezilungele i Amazing okukhulu, ungaqala into ebaluleke kakhulu. Ukuze uthathe indawo yokuqala, kumele ukuma aqonde, imilenze ukusabalala ububanzi ehlombe ngaphandle, agobe umzimba phambili ngesikhathi esifanele engela, esifubeni nasesiswini kufanele ibekwe parallel phansi. "The Mill" - uzivivinye ukuthi kumelwe nakanjani kwenziwe ngaphandle umthwalo ezengeziwe ngemuva, ngakho imilenze kungenziwa buhlanjululwe kancane ebanzi, ukuze iyashelela.
Hands kufanele buhlanjululwe esandleni, ibuye zifana kuya phansi, ngidonsa umoya bese exhale uthinte sakhe sokunene umlenze okuphambene Sock, ngaphandle nokuvusa isithende hhayi eguqa ngamadolo yakho. Nakuba ngakwesokunene iqondiswa phansi, kwesokunxele ukhuphuka phezu emuva. Ngakho, uhlobo ukuzungeza umzimba, futhi kungokufanayo nangendoda - sobunxele iya nomlenze wesokunene nesokudla liphuma khona. Kufanele wokuthi une emuva bushelelezi, futhi izandla zakhe - eqinile. ukunyakaza okunjalo kuyokusiza ukunciphisa imisipha lateral esiswini kanye okhalweni.
Uma uzizwa ukhathala uphelelwa ku imikhono, imilente noma emuva, ukuthatha isikhundla ukuqala bese uphinda emva kwesikhashana futhi. "The Mill" - uzivivinye ukuthi kufanele akenzanga izikhathi ezingaphezu kwezimbili ngosuku nge amasethi 10 ematfuba ohlangothini ngalunye.
Uma zicwaningwe lesi sivivinyo, ungakwazi uqhubekele yinkimbinkimbi kwako: ehle ngezansi, ukufinyelela for the izandla hhayi amasokisi, futhi zingakakhubeki izinyawo zenu, ungakwazi sithathe dumbbell noma iluphi olunye zaba namandla kakhulu.
Lapho imisipha esiswini kanye izinhlangothi iyoba nokunwebeka ngaphezulu, uzophawula yalokho okuhle: umzimba iba okhalweni slimmer futhi ukuthola ukuma ezikhangayo. Into esemqoka - musa ayeke khona!
Yisiphi isilwane ukuqala, ukuthi konke kuhamba kahle